Askari horay uga mid ahaa Sirdoonka Mareykanka oo lagu eedeeyay inuu qorsheenayay inuu ku biiro Al-Shabaab – Radio Daljir
Askari horay uga mid ahaa Sirdoonka Mareykanka oo lagu eedeeyay inuu qorsheenayay inuu ku biiro Al-Shabaab
Washington,Jan 10 -Askari horay uga mid ahaa ciidamada gaarka ah ee sirdoonka dowladda Mareykanka ayaa lagu eedeeyey inuu qorsheynayay inuu ku biiro kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka.
Craig Baxam oo ah 24-sano jir kasoo jeeda deegaanka Maryland ee nawaaxiga magaalada Washington ayaa lagu eedeeyey inuu qorsheeynayay inuu ku biiro ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh ururka Al-Qaacida.
Waaxda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay Craig Baxam in la qabtay 23-kii bishii December ee sanadkii hore xilli uu lasocday gaari marayay magaalada Mombasa ee dalka Kenya islamarkaana uu doonayay inuu kaga sii gudbo dalka Soomaaliya si’uu uga barbar dagaalamo Al-Shabaab.
Craig Baxam ayaa ciidamada Mareykanka ku biiray sanadkii 2007-dii waxaana sideed bilood ka dib loo diray dalka Ciraaq,isagoona horay uga soo howlgalay dalka Kuuriyada Koonfureed sanadkii 2010 bishii Augst.
Maxkamad kutaala dalka Mareykanka ayaa la filayaa maalinta bari oo talaado ah in lasoo taago,waxaana la filayaa in lagu xukumo 15-sano oo xarig hadii lagu helo eedaymaha loo haysto.